पोर्चुगलमा यसरि भयो एकै घरका दाजुभाइको दुखद निधन ! « Etajakhabar
पोर्चुगलमा यसरि भयो एकै घरका दाजुभाइको दुखद निधन !
प्रकाशित मिति : २९ पुष २०७६, मंगलवार १०:३३
लिस्बन । पोर्चुगलको समुन्द्रमा डु बेर दुई नेपाली दाजुभाईको निधन भएको छ ।निधन हुनेमा धादिङ थानेबास स्थायी घर भै अहिले बाराको सिमरामा बस्दै आएका कमल वाइबा र उनका भाइ श्याम वाइबा रहेका छन् । राजधानी लिस्बनको कास्काइसको समुद्रमा माछा मा र्न गएका उनीहरुलाई छालले तान्दा ज्यान गएको बताइएको छ ।
छाल हेर्न गएकाहरूले दुई दाजुभाइलाई देखेपछि तुरुन्तै प्रहरीलाई खबर गरेको बताइएको छ । गत शुक्रबार मृ तक दाजुभाइले माछा मा र्ने लाइसेन्स र माछा मार्दा प्रयोग हुने सुरक्षा ज्याकेट किनेर आएको बताइएको छ । लगत्तै सामुद्रिक प्रहरीले खोजी गरेर उद्धार गर्न सफल भएपनि उनीहरूको निधन भइसकेको थियो ।
८ महिनाअघि डेनमार्कबाट पोर्चुगल गएका उनीहरुले कासकाइसमा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गर्दे आएका थिए ।उनीहरुको श ब काइस्काइसको अस्पतालमा अस्पतालमा राखिएको बताइएको छ ।
विराटनगर । विराटनगरमा फेरी एक जनाको निधन भएको छ । उनको कोरोना परिक्षण हुँदैछ ।
काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले पटक पटक कोरोना भाइरसको अचुक औषधि कहिल्यै पनि